Diyaarad lacag siday oo lagu qabtay Garoonka Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Diyaarad lacag siday oo lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Diyaarad lacag siday oo lagu qabtay Garoonka Muqdisho
Wararka Idaacadda Radio baydhabo ay ka heleyso Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Ciidamada ammaanka gelinii dambe ee maanta ay gacanta ku dhigeen Diyaarad lacag siday.
Diyaaradan ayaa ka timid wadanka Isu tagga Imaaraadka, waxaana qabashadeeda ay ka dambeysay kadib markii Ciidamada ammaanka ay baaritaano kula dhaqaaqeen Boorsooyin saarnaa Diyaaradda oo ay wateen Howlwadeeno ka tirsan safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho.
Ilo xog ogaal ah ayaa inoo sheegay lacagtan tiro ahaan in ay gaareyso $20,000,000 (Labaatan Milyan oo Doolar), halkaasina ay ka qaadi rabtay Diyaarad ku sii jeeday Magaalada Garowe, si loogu geeyo Ciidanka Puntland oo qeyb ahaan ay mushaar siiso Dowladda Imaaraadka Carabta.
“Marna ma rabo magaceyga iyo codkeyga inaad u adeegsataan warbaahinta, waxaan ka tirsannahay shaqaalaha ka howlgala gudaha Garoonka, waxaan kuu xaqiijinayaa in Ciidamada ay qabteen lacag badan oo Diyaarad ay ka keentay Imaaraadka, sabab rasmi ahna kama hayo, weli baaritaano ayaa socda.” Ayuu yiri qof ka mid ah shaqaalaha Garoonka.
Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde waxaa ka socda wada hadal lagu dhameynayo khilaafa ka dhashay lacagtan, iyada oo weli saraakiisha ammaanka Garoonka aysan faah faahin ka bixin arrintan.